भतेरपाटावासीमा खानेपानीको हाहाकार » खबरहरुको एउटै केन्द्र
भतेरपाटावासीमा खानेपानीको हाहाकार
शुक्रबार, चैत्र २५, २०७३ ०९:२६ मा प्रकाशित !
२५ चैत​, पर्वत ।लामो समयको खडेरीका कारण वर्षात्मा घैँटामा सङ्कलन गरिएको पानी सुकेपछि पर्वतको एक विकट गाउँमा खानेपानीको हाहाकार परेको छ । नजिकमा खानेपानीको कुनै स्रोत नहुँदा काकाकुलको नियति भोगिरहेका दक्षिण पर्वतको पैयुँ गाउँपालिका–६ उरामपोखरास्थित भतेरपाटावासी घैँटामा पानी सकिएपछि झनै समस्यामा परेका छन । उनीहरुले विगत एक दशकदेखि घैँटाको पानीको भरमा गुजारा चलाउँदै आएका थिए ।
वर्षात्को समयमा सङ्कलन गरेर राखेको पानी पिउन बाध्य उनीहरु त्यही पानी पनि सुकेपछि बस्ती नै सार्नुपर्ने अवस्थामा छन । एक दशकअघि फिनिडा र नेवा नामक संस्थाले गाउँका ७० घरमा खानेपानी सङ्कलन गर्ने घैँटा निर्माण गरिदिएपछि स्थानीय बासिन्दालाई राहत मिलेको थियो । वर्षात्को समयमा गाउँ नजिकै मूल उठ्ने भएकाले पानीको समस्या नहुने भए पनि हिउँदको समयमा दुई घन्टा टाढा रहेको कुवामा गएर पानी पिउन बाध्य छन ।
गाउँमा खानेपानी योजना निर्माण गरिदिन पटक पटक विभिन्न संस्थामा अनुरोध गरे पनि कुनै सुनुवाइ भएन केही वर्षअघिसम्म भोक्सिङदेखि ल्याएको खानेपानी योजना मर्मतसम्भारको नहुँदा जीर्ण बनेपछि गाउँलेले पानीको समस्या भोग्नुपरेकोे अर्का स्थानीयवासी नरबहादुर थापाले बताए ।
सदरमुकामदेखि टाढाको दूरीमा रहेको गाविस भएकाले जिल्लाले समेत उचित ध्यान नदिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । वर्षौंदेखि खानेपानीको अभाव खेप्दै आए पनि कुनै निकायले चासो नदेखाएको स्थानीयवासी लालश्री थापाले बताए ।
PREVIOUS POST Previous post: निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको लागि ज्ञापनपत्र
NEXT POST Next post: अफगानिस्तानमा २८ लडाकु मारिए
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, चैत्र २५, २०७३ ०९:२६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, चैत्र २५, २०७३ ०९:२६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, चैत्र २५, २०७३ ०९:२६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, चैत्र २५, २०७३ ०९:२६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, चैत्र २५, २०७३ ०९:२६